Ahoana ny fomba fampandehanana ny iPhone amin'ny fifandraisana - Firaketana automatique ary amin'ny App
Ny fampandrenesana dia sabatra roa lela. Mampitandrina anao amin'ny hafatra manan-danja izy ireo mba hitazomana anao amin'ny zavatra maro, nefa maro amin'izy ireo dia mety ho mavitrika ary mety hahatonga anao tsy hamokatra. Takatr'i Apple fa mila mifantoka sy mavitrika ny mpampiasa azy ireo, ka nampidirin'izy ireo ny fampahafantarana tsara kokoa.
Azonao atao izao ny mikirakira ny fampiasana iPhone raha ny app na ny mpandefa. Avelao ity lahatsoratra ity hitarika anao.
Miaraka amin'ny mihodina amin'ny iOS 12, Apple dia nanao fiovana mba hanamora ny fanaraha-maso ny fampandrenesanao. Ny fomba iray ahafahana mifehy tsara kokoa ny fampandrenesana anao dia ny fametrahana azy ireo ho lohahevitra, sender, na karazana app. Ankehitriny, tsy ho voarohirohy amin'ny fampandrenesana intsony ianao. Mianara mifantoka amin'ny fanamafisana ny iPhone ary jereo izay zava-dehibe amin'ny fijerena haingana.
Ahoana ny fomba fampandrenesana ny iPhone
Ny fampandrenesana vondrona dia manamaivana anao ny mijery ny fampandrenesanao iPhone. Ankehitriny, tsy voatery hivezivezy amin'ny lisitry ny fampahafantarana hitady ny tena zava-dehibe. Ny fomba manaraka dia hanasongadina fomba roa amin'ny fanangonana ny fampandrenesana iPhone. Ny fizarana tsirairay dia hifanakalozana hevitra ny fomba hanesorana ny fampandrenesana vondrona ho an'ny app.
Ahoana ny fomba fampahafantarana ny iPhone amin'ny iPhone automatique
Miaraka amin'ny fanamafisana fanamafisam-peo automatique, ny iPhone dia manapa-kevitra ny fampandrenesana ny fampiharana ny apps. Araho ireo dingana manaraka mba ahafahanao miditra automatique amin'ny fifandraisana amin'ny iPhone.
1. Mandehana any amin'ny efijery an-tokatranonao.
2. Avy eo, sokafy ny app's Settings Settings.
3. Avy amin'ny Settings, tadiavo ny safidy Notifications.
4. Amin'ny fampandrenesana fanamarihana, mandehana any amin'ny sehatra fampandrenesana fampahafantarana ary mifidiana ny rindrambaiko izay tianao hapetraka amin'ny vondrona automatique. Tadiavo ny app raha hijery ny safidy momba ny fampandrenesana azo ampiasaina ho an'ny fampiharana voafantina. Ho an'ny lesona ho an'ny fampiharana, andeha hojerentsika ao amin'ny Facebook Page app.
5. Ao amin'ny pejin-tranonkala fampahafantarana voafantina, mandehana any amin'ny sehatra Options ary tadiavo ny safidin-kafatra Notification.
6. Tsindrio ny safidy automatique mba hametra ny fampandrenesanao mifototra amin'ny fampiharana voafantina dia automatique. Ny mari-pamantarana iray dia aseho amin'ny faritra farany indrindra amin'ny safidy mba hanondroana fa voafidy ilay safidy.
7. Azonao atao ny manindry ny bokotra Back mba hiverina any amin'ny efijery teo aloha. Ny pejy Notification app dia hampiseho anao koa fa ny fampandrenesana ny fampandrenesana app dia napetraka amin'ny Automatik. Vita ianao.
Ahoana ny fomba fampandrenesan'ny iPhone amin'ny alalan'ny fampiharana
Azonao atao ny mifidy ny fampahafantarana ny iPhone anao amin'ny alalan'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana ireo:
1. Mandehana any amin'ny efijery an-tokatranonao. Ho an'ny iPhone 8 sy ny modelim-bolo taloha, ny fanindriana ny bokotra Home dia mitondra anao any amin'ny tranokala Home. Ho an'ny modely iPhone X sy ny vondrona mitovy (iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max), afaka miditra ao amin'ny efijery an-trano ianao amin'ny alàlan'ny fifandimbiasana avy amin'ny faritra ambany amin'ny efijery mankany amin'ny tapany afovoany.
2. Avy amin'ny Home iPhone, sokafy ny menu Settings.
3. Avy eo, sokafy ny safidy Notifications amin'ny safidinao.
4. Avy amin'ny fampandrenesana fanovozan-kevitra, alefaso any amin'ny style of the Notifications ary tsindrio ny app izay te hanova ny fomba fampandrenesana.
5. Avy amin'ny pejin'ny fampandrenesana App, mandehana ao amin'ny safidy Notification Grouping.
6. Aorian'izany, tsindrio ny safidy By App raha hifidy ny karazana fampitam-baovao.
7. Farany, tadiavo ny bokotra Back mba hiverina any amin'ny efijery teo aloha. Azonao atao ihany koa ny miverina miverina any amin'ny efijery an-trano. Ny famarotana dia voavonjy ho azy.
Ahoana ny fandroahana an-tariby ny fifandraisana iPhone
1. Mandehana any amin'ny efijery an-tokatranonao. Ho an'ny iPhone 8 sy ny modelim-bolo taloha, ny fanindriana ny bokotra Home dia mitondra anao any amin'ny tranokala Home. Ho an'ny modely iPhone X sy ireo karazana mitovy (iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max), afaka azonao Mankanesa aty amin'ny efijery an-trano avy amin'ny ampahany ambany amin'ny efijery mankany amin'ny tapany afovoany.
2. Avy amin'ny tranonkalan'ny iPhone anananao, tsindrio ny sary miainga mba hanokafana ny menio Settings.
3. Avy eo, sokafy ny safidy Notifications avy amin'ny Settings iPhone anao.
4. Avy amin'ny fampandrenesana fanovozan-kevitra, alefaso any amin'ny style of the Notifications ary tsindrio ny app izay te hanova ny fomba fampandrenesana. Ho an'ity tatitra ity dia ampidiro ao amin'ny app Facebook Page.
5. Avy amin'ny pejin'ny fampandrenesana voafantina voafantina, tsindrio ny safidy Notification Grouping.
6. Aorian'io, tsindrio ny safidy OFF raha te hiala ny Notifications Grouping.
7. Farany, tadiavo ny bokotra Back mba hiverina any amin'ny efijery teo aloha. Ny fikambanana fampandrenesana dia tokony aseho mialoha.
F: Azoko atao ve ny manova ny fampandrenesana fampandrenesana fanamarihana avy hatrany? Hitako ny dingan'ny fandehan-javatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny fampiharana tsirairay ary manova ny fifampiresahana momba ny fampandrenesana mba handany fotoana loatra.
A: Indrisy anefa, Apple dia mbola tsy manolotra safidy hampiharana ny Fehezandalàna momba ny fampandrenesana ho an'ny fampiharana marobe amin'ny fotoana iray. Amin'izao fotoana izao, mila mandeha amin'ny fampiharana tsirairay ianao ary misafidy ny safidy tianao.
Vao avy nianaranao ny fomba hikirakira ny fampiasana iPhone raha te-hanova na amin'ny app. Nianatra ny fomba hanakanana ireo fampahafantarana amin'ny Vondrona amin'ny iPhone ianao. Raha manana fanontaniana momba ny iray amin'ireo dingana etsy ambony ianao, dia ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana tsetsatsetsa.
Ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny andian-dahatsoratra misy antsika ny fampiasana ny ampahany betsaka amin'ny fampandrenesanao amin'ny iOS 12. Azonao atao ny manamarina ny lahatsoratra mba hahita toro-hevitra hafa mba hampitombo ny fampitaovana iPhone anao-traikefa.
Ny 'famafa' ampiasaina ao amin'ny apps Apple dia miasa ao amin'ny iOS 10
Ity ny ao amin'ny iOS 9.1 famandrihana ho an'ny iPhone sy iPad
Ahoana ny fampiasana ny fomba amam-panaon'ny iPhone 7 Plus ao amin'ny iOS 10.1 beta
Apple iPads? Ny patentan'ny Apple dia manondro ny ho avy ny iPhones amin'ny hoavy toy ny hoe tsy manintona ...
iPhone 8 Iris Scanner Voamarina? Ireo sehatry ny indostria Claim Samsung Galaxy Note 7's Advanced Feature Com ...
Samsung Gear S2 classic 3G no fitaovana voalohany amin'ny eSIM - SIM-n'ny virtoaly virtoaly
Ny vaovao farany momba ny voaloboka dia mitondra Snap mba hitifitra ny endri-javatra sy ny fitaovana fanalahidy vaovao
Ahoana ny fampiasana syntax Wi-Fi amin'ny iPhone sy iPad
Tags:iOS iPhone Mobile fampiharana Fitaovana finday
fikarohana Company paoma famotsorana OS X bilaogy MySQL CentOS fitaovana Ubuntu 16 Unix Unité centrale Linux Facebook loharano misokatra iPhone windows update Firefox PDG hametraka Up " taona fifamoivoizana Apps API File Fitaovana finday Video One ' "PC Screen finday avo lenta 10 Windows Phone CentOS 7 GNOME HTTPS rindrambaiko lalao afa-po famerenana Twitter fitaovana finday Cortana Windows nbsp Toetoetra SEO haino aman-jery sosialy USB raki-daza WordPress Linux Mint HTML IP adiresy Plugins Bing rafitra HTTP 'App vaovao farany tahirin-kevitra app store Apple Watch web server Linux Ubuntu Systems Performance command line Microsoft Windows Ubuntu Database PPA Google Samsung ram Support Windows 10 Rafitra fikirakirana web browser Microsoft Phone fitaovana fanamarinana Debian Chrome SSD MAMAKA Apache Plugin bilaogy ubuntu 15.04 Malagasy Bible toe-tsaina Command YouTube Ubuntu 14.04 04 lalao Android SSH Users Time Samsung Galaxy Windows 8 Nginx Ubuntu 14.10 takelaka fikirakirana Server PHP fitaovana endri-javatra